Get Bruce Loss Dispo Fat Loss DVD maka FREE - Nkata
Home » DVD » Nwepu ihe nhụsianya nke Bruce Krahn na-abaghị uru maka DVD maka FREE
Nsogbu nke Ọrịa Na-akpata Nsogbu site n'aka Bruce Krahn bụ DVD dị ogologo oge zuru ezu nke dị n'efu n'enweghị ihe ọ ga-efu mgbe ọ na-enye ihe ndị ikpeazụ. Ọgba Ọrịa Na - akpata Nsogbu na - egosiputa ụzọ dị irè isi kwụsị 1-3 sentimita anụ ahụ si n'akụkụ ụfọdụ nke nsogbu ahụ gị. DVD a na-arụ ọrụ dị mma maka ndị nọ n'afọ ndụ niile.
Ọ bụ onye na-azụ onwe ya na onye na-edozi ihe na-edozi ahụ bụ Bruce Krahn. Bruce na - enye ihe nkwụsị na - abaghị uru ya bụ DVD kpamkpam ka ọ bụrụ ụzọ isi nweta ihe ngosi mmemme ọhụrụ ya. All Bruce Krahn na-arịọ maka nkwụghachi ụgwọ bụ iji kwụọ ntakịrị ụgwọ maka mbupu maka DVD ahụ.
N'ime Akwụsị Okpukpọ Ọrịa Nsogbu DVD ị ga-achọpụta:
Usoro ohuru nke na-elekwasị anya, na-eme ka abụba dị arọ ma na-ada ụda
Otu ihe oriri nke ị ga-eri n'oge kwesịrị ekwesị iji kpoo abụba afọ
Ngwakọta nri dị mfe nke ga - enyere gị aka ịkwụsị ịhụnanya gị
Ihe omuma a aghaghi ime ka ime nke a na-eme ka i buru ibu
Otu esi eme ka hormones dị n'ahụ gị nke ga - enyere aka wepu abụba si n'úkwù gị na nke dị ala
Kedu esi eji sugar mee ka achi abuba
Ma ọtụtụ, ọtụtụ ihe ọzọ
Tinyere DVD OBU, Bruce na-enyekwa hormone ya na-edozi nri nri dị ka onyinye n'efu
Nwere mmasị? Nweta DVD gị N'IHI HERE
Were Pita na-eje ozi na-eri akwụkwọ nri maka FREE